Umbuzo: IzoHlela I-B Mess Up Your Cycle - BikeHike
I-Plan B iwonakalisa isikhathi esingakanani umjikelezo wakho?
Ingabe iphilisi lasekuseni emva kwephilisi lingaphazamisa umjikelezo wakho izinyanga?
Ungakwazi yini ukuthola isikhathi sesibili ngemva kokuthatha i-Plan B?
Ingabe i-Plan B iyashintsha i-ovulation yakho?
Ingabe i-Plan B ingahluleka?
Ingabe iphilisi lasekuseni emva kwephilisi lingathinta isikhathi sakho ezinyangeni ezi-2 kamuva?
Ungakwazi yini ukuphuphunyelwa yisisu ngemva kokuthatha iPlan B?
Ngazi kanjani ukuthi ngabe ngiyaqanda isisu?
Yiziphi izimpawu ze-ovulation?
Ngingasho kanjani uma ngi-ovulating?
Ingabe ukhona owakhulelwa ngemva kokuthatha iPlan B?
Ingabe iphilisi lasekuseni liyasebenza uma lingena ngaphakathi kuwe?
Ingabe ukuthatha uhlelo B kuyayithinta ingane yakho?
Ingabe iPlan B iyingozi uma usukhulelwe?
Ingabe i-Plan B ingakunikeza ukuhlolwa kokukhulelwa?
Yiziphi izimpawu zokukhulelwa ngesonto lokuqala?
Ungabona kanjani ukuthi uvundile ekhaya?
Ungakwazi yini ukukhulelwa uma ungenayo i-ovulating?
Ngazi kanjani ukuthi anginayo i-ovulating?
Zingaki izinsuku ngaphambi kwe-ovulation owakhulelwa?
I-Levonorgestrel itholakala kumaphilisi okulawula ukuzalwa, kodwa i-Plan B iqukethe umthamo ophezulu ongashintsha amazinga e-hormone emvelo yomzimba wakho. Amahomoni engeziwe angase, wona, athinte umjikelezo wokuya esikhathini, okuholela esikhathini esingaphambi kwesikhathi noma esibambezelekile kanye nokopha okukhulu noma okuncane.
Iningi lezinguquko ezibangelwa izinto zokuvimbela inzalo eziphuthumayo njengoHlelo B aziqhubeki ngaphezu komjikelezo owodwa wokuya esikhathini. Uma isikhathi sakho sesiphelile isonto sekwephuzile ngemuva kokuthi uthathe i-Plan B, kunethuba lokuthi ukhulelwe, ngakho cabanga ukuthatha ukuhlolwa kokukhulelwa.
Ukuthatha Uhlelo B (olubizwa nangokuthi ukuvimbela ukukhulelwa kwezimo eziphuthumayo, noma iphilisi lasekuseni emva kokuya esikhathini) kungawushintsha okwesikhashana umjikelezo wokuya esikhathini womuntu, ngakho isikhathi sentombi yakho cishe sizohluka okungenani inyanga. Akukho lutho oluyingozi noma oluyingozi ngokusebenzisa iphilisi lasekuseni njalo lapho kudingeka.
Okunye ukopha okungajwayelekile - okubuye kwaziwe ngokuthi amabala - kungenzeka ngemuva kokuphuza iphilisi lasekuseni. Ukuthola isikhathi sakho ngemva kokuthatha i-emergency contraception (EC) kuwuphawu lokuthi awukhulelwe. Kuvamile futhi ukuthi isikhathi sakho sibe nzima kakhulu noma sibe lula, noma ngaphambi kwesikhathi noma kamuva kunokujwayelekile ngemva kokuthatha i-EC.
Ngokwelebula yomkhiqizo, i-Plan B ivimbela noma ibambezela ukuphuma kweqanda, noma ukukhishwa kweqanda. Kungase futhi kuvimbele ukuvundiswa, lapho iqanda nesidoda kuhlangana.
Amaphilisi okuvimbela inzalo omthamo owodwa avimbela ukukhulelwa cishe ngama-50-100% esikhathi. Ezinye zezizathu zokuthi amaphilisi okuvimbela inzalo angakwazi ukuhluleka zihlanganisa isikhathi sokuvuthwa kwamaqanda, i-BMI kanye nokusebenzisana kwezidakamizwa.
“I-morning after pill ingakubambezela ukuya esikhathini esilandelayo kodwa akwenzeki njalo. Ukuya esikhathini esilandelayo kungase kusheshe ngisho nangaphambi kwesikhathi,” kusho uJulia, “Nokho, uma isikhathi sakho sekwephuzile ngezinsuku ezingaphezu kweziyisikhombisa, kufanele wenze ukuhlolwa kokukhulelwa.”
I-Plan B ayikwazi ukukukhipha isisu noma ikulimaze uma usukhulelwe. Uma UNGAKUtholi ukopha esithweni sangasese sangasese emasontweni amathathu ngemva kokuthatha i-Plan B, shayela Isikhungo Sezempilo ku-3-685 ukuze uthole isikhathi.
ubude bomjikelezo wakho wokuya esikhathini - ukuvuthwa kweqanda kuvamise ukwenzeka ezinsukwini eziyi-10 kuya kweziyi-16 ngaphambi kokuthi uqale ukuya esikhathini, ngakho-ke ungase ukwazi ukuthola ukuthi kungenzeka nini ukuqanda uma unomjikelezo ojwayelekile. amafinyila wakho womlomo wesibeletho - ungase ubone isikhwehlela esimanzi, esicacile futhi esishelelayo ngesikhathi sokuvuthwa.
Izimpawu Ze-Ovulation Umphumela Omuhle Ekuhlolweni Kwe-Ovulation. I-Cervical Mucus Evundile. Ukwanda Kwesifiso Socansi. I-Basal Body Temperature Inyuka. Shintsha Isimo Somlomo Wesibeletho. Ukuthamba Kwebele. Iphethini ye-saliva Ferning. Ubuhlungu Be-Ovulation.
Izimpawu Ze-Ovulation Ukukhuphuka kwezinga lokushisa lomzimba eliyisisekelo, ngokuvamile li-1/2 kuya ku-1 degree, likalwa nge-thermometer. Amazinga aphezulu ehomoni ye-luteinizing (LH), akalwa kukhithi yokukhipha amaqanda ekhaya. Amafinyila omlomo wesibeletho, noma ukukhishwa kwesitho sangasese sowesifazane, kungase kubonakale kucace, mncane, futhi kunwebeka, njengokumhlophe kwamaqanda aluhlaza. Ukuthamba kwebele. Ukuqunjelwa.
Balinganiselwa ku-0.6 kuya ku-2.6% abesifazane abaphuza i-morning-after pill ngemuva kocansi olungavikelekile basazokhulelwa. Lokho abantu abakwaziyo – nabangakwaziyo – mayelana nephilisi lasekuseni kuvezwe obala ngemva kokuba umbhali weRefinery29 esabe ngodaba lwakhe lokukhulelwa naphezu kokuphuza ukuvimbela inzalo okuphuthumayo.
yebo isazosebenza. Ucwaningo oluningi luveza ukuthi ukusebenzisa iPlan B akubangeli izinguquko olwelweni lwesibeletho (endometrium). Cha - ukuvimbela inzalo okuphuthumayo (okubizwa nangokuthi iphilisi lasekuseni) kungasiza ekuvimbeleni ukukhulelwa ngemva kocansi olungavikelekile, hhayi ngaphambili.
Uhlelo B ngeke lulimaze umbungu osakhula. Uma i-Plan B ithathwe ngephutha ngesikhathi sokukhulelwa, ngeke ilimaze umbungu okhulayo. Ukusebenzisa Uhlelo B ngeke kuthinte ikhono lowesifazane lokukhulelwa esikhathini esizayo. Abesifazane bangagcina amaphilisi ekhaya uma kunesimo esiphuthumayo.
I-Plan B iphilisi lokuvimbela inzalo, okusho ukuthi livimbela ukukhulelwa. Uma usukhulelwe, iphilisi ngeke lisebenze. Isidakamizwa "ngeke siphazamise noma sithinte ukukhulelwa okukhona," ngokusho kukaTeva.
I-Plan B iwuhlelo lokuvimbela inzalo oluphuthumayo, futhi kufanele luthathwe kungakapheli amahora angama-72 ukukhulelwa okungenzeka. Ngeke kuthinte imiphumela yokuhlolwa kwakho kokukhulelwa. Ngenxa yokuthi ukuhlolwa kokukhulelwa akulona iqiniso amahora angu-72 ngemva kokukhulelwa, i-Plan B ayiphazamisi.
Izimpawu zokukhulelwa ngesonto 1 isicanucanu noma ngaphandle kokuhlanza. izinguquko zebele ezihlanganisa ukuthamba, ukuvuvukala, noma ukuzwa ukushoshozela, noma imithambo eluhlaza okwesibhakabhaka ebonakalayo. ukuchama njalo. ikhanda elibuhlungu. izinga lokushisa lomzimba eliphakanyisiwe. ukuqunjelwa esiswini noma igesi. i-pelvic cramping noma ukungakhululeki ngaphandle kokopha. ukukhathala noma ukukhathala.
Ukuhlolwa okuningi kwe-FSH ekhaya kufana kakhulu nokuhlolwa kokukhulelwa okwenziwa ekhaya. Ukuhlola okulula, sebenzisa inkomishi encane ukuqoqa umchamo kusukela ekuchameni kokuqala kosuku. Bese ucwilisa induku yokuhlola kusampula yomchamo bese uyibeka endaweni eyisicaba ngenkathi imiphumela yokuhlolwa ibhalisa.
Ungakhulelwa uma uya ocansini olungavikelekile noma yikuphi kusukela ezinsukwini ezi-5 ngaphambi kokuphuma kwe-ovulation kuze kube usuku olungu-1 ngemva kokuvuthwa. Awukwazi ukukhulelwa uma ungakhiqizi iqanda ngoba alikho iqanda lokuthi isidoda sivundise. Uma unomjikelezo wokuya esikhathini ngaphandle kwe-ovulating, ubizwa ngokuthi umjikelezo we-anovulatory.
Uphawu oluyinhloko lokungazali ukungakwazi ukukhulelwa. Umjikelezo wokuya esikhathini omude kakhulu (izinsuku ezingama-35 noma ngaphezulu), omfushane kakhulu (ngaphansi kwezinsuku ezingama-21), okungajwayelekile noma ungekho kungasho ukuthi awukhiqizi ngeqanda.
Ukukhulelwa kungenzeka ngobuchwepheshe kuphela uma uya ocansini phakathi nezinsuku ezinhlanu ngaphambi kwe-ovulation noma ngosuku lwe-ovulation. Kodwa izinsuku ezivunde kakhulu yizinsuku ezintathu eziholela futhi kuhlanganise ne-ovulation. Ukuya ocansini ngalesi sikhathi kukunikeza ithuba elihle lokukhulelwa.
Impendulo Esheshayo: Ingakwazi Ukuhlela I-B Mess With My Cycle
Ingabe i-Plan B iphazamisa umjikelezo wakho wokuya esikhathini
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Plan B Yephilisi Iyamosha Umjikelezo
Impendulo Esheshayo: Ingakwazi Ukuhlela Umjikelezo Wenkathi Ye-B Mess Up
Ingakwazi Ukuhlela I-B Mess Ngomjikelezo Wakho
Impendulo Esheshayo: Ingakwazi Ukuhlela I-B Mess Up My Period Cycle
Ingakwazi Ukuhlela I-B Mess Up Umjikelezo Wakho Olandelayo
Umbuzo: Ingabe i-Plan B yamosha umjikelezo wakho wokuya esikhathini
Umbuzo: I-Plan B Mess Up Cycle iyisikhathi esingakanani
Umbuzo: Ingakwazi Ukuhlela B Ukumosha Umjikelezo Wakho Wokuya esikhathini
Impendulo Esheshayo: Ingakwazi Ukuhlela I-B Mess Ngomjikelezo Wakho Wesikhathi